Ihe ịga leta na Philippines | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Philippines, Ihe ị ga-ahụ
Philippines ọ bụ ezigbo njem njem. O nwere otutu ebe di nma ma nihi nke a, o choro njem kpamkpam ma o bughi uzo ozo nke ndi Southeast Asia mere.
N'ezie, ọ bụrụ na mmadụ enweghị oge buru ibu, na otu njem ọ gaghị ekwe omume ikpuchi Philippines niile na mma ya, yabụ ọnụ ụzọ mepere maka nloghachi. Taa, anyị ga-elekwasị anya na ugwu Philippines na ise nka ube di ogologo kariri.
Na Philippines bụ nnukwu compendium nke isuo ya mere enwere uzo di iche iche: ugwu ugwu, ugwu osikapa, osimiri di ike, osimiri aja ocha na mmiri doro anya ... Ha kariri puku agwaetiti asaa ọtụtụ na-ekwenye na ha na-enye ebe kachasị mma mmiri na ụwa.
Ihe onyinye a bụ na mgbe ịmaghị Philippines ị na-eche ebe ị ga-ebido. Nke ahụ ga-adabere oge niile ị nwere. Ihe kariri, ma o doro anya na ọ bụghị ihe a na-emebu. Ọ bụ ya mere taa anyị ga-eji obere ọsọ maka osimiri, agwaetiti na nsị anyị ga-aga Northern Philippines, mmalite dị mma ịmara obodo a na enyi na enyi.
Njem ahụ malitere na Manila, isi obodo. Ọ nweghị ike ịbụ otu ọzọ n'ihi na maka anyị, ndị na-asụ Spanish, enwere ọtụtụ Spain ebe a. Onye na-ese ụkpụrụ ụlọ, ụfọdụ aha, ihe niile na-echeta oge gara aga nke Hispanic. Imirikiti ndị njem nleta na-eji Manila dị ka mmiri ruo ebe ndị ọzọ, mana ebe ọ bụ isi obodo, ị nwere ike iji ụbọchị ole na ole mata ya.
Kedu ebe nkiri ndị a tụrụ aro? La Obodo mgbidi, ihe foduru nke alaeze ochie nke Spain, Intramuros. Ọ nwere cobb, n'okporo ámá, chọọchị dị iche iche na ụlọ ndị Europe. Lostlafu ebe a kwesịrị ya. Na Fort Santiago site na narị afọ nke XNUMX Ọ bụ ebe ọzọ na-atọ ụtọ, nke ndị Spanish na ndị Bekee, ndị America na ndị Japan bi na ya. Taa ọ bụ ihe ngosi nka.
La Chọọchị San Agustín ụlọ ihe ngosi nka na bụ chọọchị kacha ochie na mba a. Ọ bụ ebe a na Intramuros na ọ bụ Ihe Nketa Worldwa. Isi nso n'ụsọ oké osimiri bụ Malecon Manila, ebe kachasị mma iji tụgharịa uche maka ọdịda anyanwụ. O nwere kilomita abụọ nke nkwụ gbara ya gburugburu ma nwee ndị na-ere ahịa na ndị egwu na-eme njem. Na Ogige Rizal Ọ bụ ọmarịcha saịtị dị n’èzí n’etiti obodo ahụ, nwere okporo ụzọ, ihe akpụrụ akpụ na ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na ya.
Some mee ụfọdụ ụlọ ahịa dị ọnụ ala enwere Market nke Divisoria, n'ime obi Obodo Chinatown, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọgbara ọhụrụ enwere Manila Super Nnukwu alllọ Ahịa. Ọ bụrụ n’ịchọghị ịga ebe akpọrọ aha, ị nwere ike ịgbazite igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ debanye aha maka njem igwe kwụ otu ebe. Ụgbọ njem Bambike Ọ bụ nnukwu nhọrọ n'ihi na ọ nwere ejiri aka anyịnya igwe ndị obodo, jiri achara. Echefukwana!
Ozugbo ị lechara Manila anya, ọ ga-aga north. Maka nke ahụ, ịzụta tiketi ụgbọ ala ebe a ugwu Luzon. Fọdụ ndị njem anaghị ele Luzon anya ma na-awụlikwa elu n'akụkụ osimiri, mana n'isiokwu a, anyị na-achọ ịpụ n'okporo ụzọ a na-ahụkarị ma kwado obere ebe ndị na-ewu ewu. Lee lee Luzon.
A na-achọ Northern Luzon mma osikapa teres. UNESCO ekwuputala ha Ihe Nketa Worldwa ma si otú a na-adọta ndị njem nleta, mana ha na-anọkarị ebe ahụ ma ghara ịga n'ihu. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ ọmarịcha ọdịdị mara mma mana na enweghị ọtụtụ mmadụ, ị ga-aga ileta ubi osikapa ndị ọzọ na-abụghị nke Banau. Na-abịarute mgbe ị gachara njem gị ruo oge ọzọ, na-arịgo ugwu ahụ. Lee ndị dị oké ọnụ ahịa Batad osikapa teres.
Ma ebe ọ bụ na ị rutere ebe a ezigbo bụ raru ura. Enwere obere ụlọ ndị e wuru na mbara ala ahụ, adlọ Batad Transient, dịka ọmụmaatụ, tinyere nri ụtụtụ. Dị ka anyị kwuru, n'ebe ugwu Luzon ị ga-eji bọs abịa. Enwere ọrụ abalị site na mpaghara Sampoloc na Manila ihe dị ka euro iri abụọ ma enwere ike zụta ya tupu oge ahụ ma ọ bụ otu ụbọchị. Busgbọ ala ahụ na-apụ na 9pm.
Ọzọkwa n'ebe ugwu enwere ihe ị hụrụ n'ezie na akwụkwọ: akpati ozu ndị edoziri na ugwu, ndị ama ama Igbe ozu sagada. O wee bụrụ na agbụrụ ndị dị n'akụkụ a nke Philippines na-edebe ndị ha nwụrụ anwụ n'ime igbe ozu ndị na-etinyere na mgbidi ahụ, na-eme ka ha bịarukwuo nso n'eluigwe. Ọ bụ ezie na ọ bụ omenaala furu efu nke ukwu, a ka nwere igbe ozu ebe ahụ. A na-esite na bọs site na Banaue, na bọs na-aga Baguio.
Baguio bụ obodo Philippines nke dị n’elu ugwu, n’ebe ugwu nke ugwu agwaetiti Luzon. Ọ tọrọ ntọala site na America na 1909 ma ọ bụ ruo ogologo oge oke osimiri si na mba. Ọ nwere oge oyi ma dị nwayọọ, ọ bụghị ihe zuru ezu. Site na Manila enwere kilomita 250. E nwere ụfọdụ ebe nkiri dịka ahịa ya, ogige botanical, katidral ma ọ bụ ebe obibi onye isi ala.
Ugwu kachasị elu na Luzon dị ebe a, ọ dịkwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 3 puku mita elu, ọ bụ Ugwu Pulag. Enwere njegharị ga-ewe gị mara ya. Njegharị a gụnyere ịbanye n'ụgbọ mmiri n'ụkwụ jeep n'obodo nta ugwu ebe ị na-ehi ụra n'otu ụlọ dị na mpaghara wee, n'isi ụtụtụ, ịrịgo ahụ na-amalite. Ọbụna njem a gaa n'eluigwe nwere ike ịbụ nleta ikpeazụ gị na Luzon n'ihi na ị nwere ike ịhazi ụlọ ọrụ ndị njem iji weghachite gị ozugbo na Manila, kama ịlaghachi n'obodo Baguio.
N'otu oge mechaa njem a na ugwu Now nwere ụzọ doro anya iji gaa n'ihu njem gị wee gbaga na ndịda Philippines. A ezi njegharị nwere ike ima elu site n'ebe ugwu Luzon na Agwaetiti Siargaoọmụmaatụ isi obodo mba ofesi, na mpaghara Mindanao. N'etiti obodo Philippines bụ Boracay, ebe kachasị elu: osimiri ya dị kilomita anọ bụ nrọ, enwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na ndụ abalị.
Boracay na-anọ abalị atọ ma ọ bụ anọ, agaghịkwa ọzọ, belụsọ na ị masịrị egwuregwu. Plane nwere ike ịbanye ebe a site na ụgbọ elu ma ọ bụ site n'ụgbọ mmiri si Batangas. .B. Batangas Nwere ike si na Manila rute ebe ahụ naanị n'ime ụgbọ ala were naanị awa abụọ, ebe ị nwere ike ịnya ụgbọ mmiri abalị wee rute 7 n'ụtụtụ.
N'ikpeazụ, enweghị m ike ịkwụsị ịkpọ aha Coron, n'ógbè Palawan, na ya kediegwu usoro okwute na ọdọ mmiri turquoise. O nwekwara ụgbọ mmiri ekpuru, karịsịa Japanese si Agha nke abụọYabụ naanị n'ime ụgbọ mmiri nkeji 20 n'ụsọ oké osimiri enwere paradaịs dị n'okpuru mmiri. Kedu ka ị ga-esi rute obodo a? Site na Boracay ị nwere ike iji ụgbọ elu dị ala si Caticlan na Air Juan. Planegbọ elu ahụ nwere naanị oche 12 ma ọ bụ ụzọ kachasị mma iji nwee obi ụtọ na Philippines site na ikuku.
Na Coron ị nwere ọnụ ala na ụlọ na-adọrọ mmasị na-atọ ụtọ karị, ma ọ bụrụ na ịkekọrịta anaghị ewute gị. Akwụ Are nọkwa na Palawan, paradaịs nwere ọtụtụ ụlọ nnweta, ụlọ nri, ụlọ mmanya na ebe a na-egwu mmiri. E nwere ọdọ mmiri, ọgba na agwaetiti na ọtụtụ njegharị dị iji jiri otu nkume gbuo ọtụtụ nnụnụ. Njem mara mma nke ukwuu bụ nke na-ejikọ ụgbọ mmiri Coron na El Nido. Ọ dịghị ọnụ ala, mana ọ mara mma.
Ruo ugbu a, anyị na-abịa taa ma anyị na-agba ọsọ Isuo Bantayan, Cebu... Nke ahụ ga-abụ oge ọzọ.
N'ikpeazụ, ụfọdụ ozi ndị ọzọ: ịkwaga n'ime mba ahụ dị ọnụ ala, enwere ọtụtụ ụgbọ ala, ọkachasị n'ebe ugwu, ha niile nwere ntụ oyi na mgbe ụfọdụ yana ụfọdụ nri n'ụgbọ mmiri, ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri ga-aga n'etiti agwaetiti ahụ, ụfọdụ na-eme njem n'abalị na tiketi nwere ike zụta ozugbo na ọdụ ụgbọ mmiri, e nwekwara tagzi na ọgba tum tum dị ọnụ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » Philippines » Ihe ịga leta na Philippines
Atụmatụ dị mkpa maka ịgagharị n'oge coronavirus